Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Salman Raoul Salman
Salman Raoul Salman ayaa hogaaminaya oo taageera hawlaha argagixisada Xisballaahee Galbeedka Hemisphere. Hogaamiye ku jira Ururka Amniiga Dibadda ee Xisballaah (ESO), sidoo kale Salman wuxuu ku lug la’haa hawlihii shirqoolka ee dunida oo dhan ka dhacay. Ururka ESO waa qaybta Xisballaahoo mas’uulka ka ah qorshaynta, isuduwidda, iyo fulinta weerarrada argagixiso ee Labnaan wixii ka baxsan ah. Weerarrada ayaa waxaa si gaar ah lagu bartilmaameedsaday Israaiil iyo Ameerikaanka.
Qaar ka mid ah shirqoolada kaas oo Salman uu ku lug lahaa waxaa ka mid ahaa qaraxii ismiidaaminta ee xarunta dhaqanka ee Ururka Isku-taga Israaiil iyo Arjantii (AMIA) [Argentine Israelite Mutual Association (AMIA)]. Taariikhdu markay ahayd 18ka Luulyo, 1994, Xisbullaah walxaha qarxa ku xirtay gaari miino macmal ah oo ay dhigtay meel dibbad ka ah xarunta dhaqanka ee AMIA ee magaalada Buenos Aires halkaas oo ay ku dhinteen 85 qof. Salman waxaa lagu qiimeeyay inuu ahaa isuduwaha weerarka ee goobta ku sugnaa.
Wasaaradda Hantidhowrka ee Mareykanka ayaa Salman u aqoonsatay taariikhdu markay ahayd 19ka bisha Luulyo, 2019 inuu yahay sida Argagixiso Caalami ah oo Gaar Loo-aqoonsaday sida waafaqsan Amarka Dowliga ah ee 13224 inuu ahaa taageero siiyaha ururka Xisballaah ee howlaha argagixisada.
5ta Juun, 1963
Tariikhda Dhalashada oo ka Badellan